Alternative 6 an-tserasera hametrahana ny volavola anao | Famoronana an-tserasera
Alternative 6 an-tserasera hametahana ny volavolanao
Ny fampiharana layout dia ilaina amin'ny maso ivoho maro ary tsy mahagaga izany. Raha mijanona mieritreritra an'io isika dia misy dikany tanteraka. Ny antony lehibe mahatonga ny fahombiazany dia ny fanesoana ho fitaovana tsy mifantoka amin'ny famolavolana fotsiny, fa mandroso kokoa ary mifantoka amin'ny fampiasana sy ny fahazoana miditra. Ireo dia singa lehibe manandanja amin'ny tetikasa iray izay misy tranokala na finday hatrizay hatramin'ny farany dia miresaka dingana virtoaly, eny, izay amin'ny farany dia hipetrahan'ny mpampiasa antsika farany. Tianay ny hanolotra anao fampiononana sy tontolo iray izay misy loharanom-baovao mikoriana haingana sy mailaka. Saingy mety ho somary sarotra kokoa ny raharaha rehefa ao anatin'ny tetikasanay dia mampiditra faritra hafa izay tena manandanja ihany koa izahay hahazoana fahombiazana sy fahombiazan'ny volavolan-kevitra. Faritra na sehatra toa ny fampandrosoana, marketing na fivarotana mihitsy aza. Amin'izay dia mety ho sarotra kokoa ny mametraka ny endrikao.
Raha ny lojika, ny faritra tsirairay tafiditra amin'ny asantsika dia mila izay takian'izy ireo. Ny fomba tsotra sy mahomby indrindra amin'ny fandrindrana ny ezaka rehetra ataontsika dia mety amin'ny fampiasana ireo karazana rindranasa izay hanampy antsika amin'ny fandrafetana ny taolambalon'ilay tetikasanay amin'ny fomba mazava kokoa. Amin'ny faran'ny andro, ny momba azy dia ny fananganana taolana na interface mahomby sy azo ampiasaina ambonin'izany rehetra izany dia mihevitra ny filàna sy ny tanjon'ny faritra midadasika. Izany no antony atolotray eto ambany izahay hanolo anao safidy hafa mahaliana enina ary ny tsara indrindra dia ny mahita azy ireo mivantana amin'ny tranokala nefa tsy mila misintona programa hafa.
1 Balsamiq: Tonga lafatra mba hametrahana mora foana ny volavolanao
Balsamiq: Tonga lafatra amin'ny famolavolana mora ny volanao
Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny antony maro. Ny Balsamiq dia mamela anao hamorona wireframe miaraka amin'ny hery lehibe sy ny fahaleovan-tena, ahafahanao miasa amin'ny tetikasa lehibe. Amin'ity safidy ity dia hahafahanao mandamina tsara ny tetikasanao amin'ny alàlan'ny Mockups mifanerasera tanteraka fa tsy izany ihany, fa izy ireo dia maodely azo ifandraisan'ny tsirairay ao anatin'ny tetikasa tsirairay. Etsy ankilany, manolotra fomba hafa amin'ny famandrihana miaraka amin'ny drafitra isam-bolana izy ary koa ny fahafaha miditra amin'ny serivisy amin'ny fandoavam-bola tokana.
Toa an'i Balsamiq, Prototyper dia manolotra ho toy ny tena fahafahany mampivelatra ny mockups amin'ny alàlan'ny fampifandraisana modely na mockups ao anatiny ao anatin'ilay tetikasa. Ity safidy ity dia amin'ny kinova birao maimaimpoana (na dia manome maody premium aza).
Safidy mahafinaritra io raha toa ianao ka miezaka miara-miasa amin'ny ekipa mpiara-miasa. Ho fanampin'ny fizarana ny ankamaroan'ireo fiasa efa noresahintsika tetsy ambony, Mockflow dia manome antsika ny fahafaha-miasa amin'ny mpiasanay amin'ny maody ivelan'ny serasera, izany hoe, tsy mila mifandray amin'ny Internet.
Izy io dia manana toetra mahaliana izay tsy azo avela amin'ny safidintsika, toy ny mety hisian'ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy eo amin'ny tetikasanay na ny mety hisian'ny modely mamelana ary hamorona fifandraisana eo amin'izy ireo. Angamba ho teboka malemy dia azontsika atao ny manasongadina fa rindranasa karama io ary tsy manome safidy hafa maimaimpoana.
Tato ho ato dia nahazo tany marobe izy ary Mockinbird no manolotra drafitra handrafetana ny endrika sy ny interface amin'ny fahefan'ny rindrambaiko amin'ny birao fa amin'ny maody an-tserasera, tsy mila misintona na inona na inona ary amin'ny fahalalahana miditra sy miasa tanteraka amin'ny toe-javatra rehetra. Ity safidy ity dia manolotra antsika ny safidy amin'ny fanondranana ireo maodelinay amin'ny endrika hafa toa ny PDF na ny famoronana efijery samihafa tsy voafetra ho an'ny tetikasa tsirairay.
Izy io dia manana ny ankamaroan'ny fiasa izay noresahinay tamin'ny fomba hafa, na dia tsy maintsy milaza aza izahay fa nahita azy lafo. Miaraka aminy isika dia afaka misintona sy mamolavola ao anatin'ny volavolan-kevitray, mifanerasera amin'ireo modely tsirairay mandrafitra ny tetikasanay, ampidirina ny fandinihana isaky ny efijery izay novolavolainay, iarahanay miasa amin'ireo mpampiasa hafa amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo sokajin'ny mpampiasa sns.
Ny fampiasana ireo karazana fanoloana ireo dia mety ho lasa fitsitsiana fotoana be dia be ary fomba iray mahomby hanatsarana sy handrindrana ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana amin'ireo tetikasa rehetra izay mitaky firindrana sy fandaminana ireo lafiny samihafa. Amin'izao fomba izao, ny famolavolana, ny fahamendrehana, ny fahazoana miditra ary ny fampiasana dia hiaraha-miasa amin'ny tombotsoantsika sy ny tombontsoan'ny mpampiasa na mpanjifantsika amin'ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Alternative 6 an-tserasera hametahana ny volavolanao
Fandriana (@fandriana) dia hoy izy:
Tsy haiko daholo ny fitaovana rehetra, fa tsara be ny endrik'izy ireo ary hojereko izy ireo hahitako ny fomba fiasan'izy ireo. Misaotra betsaka amin'ny lahatsoratra?
Mamaly an'i Madlaunch (@Madlaunch)